Ny Fanenon’ny Sabatra Faran’izay Maranitra, Naverina Nokiraina Tao Ejipta Mba Hanesoana Ny ISIS · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2015 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Български, Français, Español, Català, English
Ampahany amin'ireo efatra efa navoaka ilay hira, izay tsy misy tsy mahery setra na iray aza. Kanefa, vao haingana, nivoaka tamin'ny endrika fanadrohadroana teny anivon'ireo mpampiasa media sôsialy tao Ejipta ilay hira. Naverina nokiraina ilay hira ary natao ho feo lafika taminà rakikira misy fandihizana, ho toy ny fomba iray hanalàna baraka ny ISIS, ilay mpiara-dia amin'ny Al-Qaeda, izay efa mifehy faritra midadasika ao Iraka sy Syria. Amin'ny teny hafa dia asehon'ireo Ejiptiana fa tsy matahotra azy ireny ry zareo.
Ny hafa mampandihy kibo, na mamokatra lahatsary misy ireo mpampandihy kibo, miaraka amin'ilay hira alefa ao ambadimbadika ao :
Betsaka ny lahatsary no azo jerena ato amin'ity rohy ity sy ity tenifototra ao amin'ny Twitter ity.
Herinandro vitsy lasa izay, niely be ny tenifototra “handeha hanatevina laharana ny Daesh aho“, ka amin'io no andefasan'ny olona ny bitsik'izy ireo toy ny hoe, “Nalain'ny rahalahiko ny fitaovana famahànako ary dia tsy mandeha intsony ny vatoaratry ny findaiko izao. Handeha hanatevina laharana ny Daesh aho”, mba hanalàna baraka ity tohan-kevitra ity.
Tsy voafetra ho ao Ejipta ihany ny fanesoana. Tao Etazonia, ny “Saturday Night Live” dia nanao hatsikana an-tsehatra momba ny ISIS.
Na izany aza, ny fanalàna baraka vondrona iray mpampihorohoro ary ny fanesoesoana azy ireny dia noraisina ho toy ny zavatra miabo ihany, saingy etsy ankilany, mampanahy ilay lahatsary notaterina ho nahitàna ankizy milalao ny ataon'ny ISIS sy ireo Nihàrany tao Ejipta, fa tsy ilay mahazatra ny maro milalao Polisy sy Mpangalatra.
Tsy resaka vazivazy ny #ISIS #prt